Kitra – Fikatonan’ny sisintany: Afa miditra eto ny Elefanta Ivoarianina saingy manaraka fepetra - ewa.mg
News - Kitra – Fikatonan’ny sisintany: Afa miditra eto ny Elefanta Ivoarianina saingy manaraka fepetra
Azo antoka fa hotanterahina eto
Madagasikara ny lalao miverina hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy
ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, eo amin’ny fifanintsanana
hiadian-toerana ho an’ny Can 2022.
Tsy misy intsony ny
fisalasalana fa hatao eto Madagasikara ihany ny fihaonana miverina
eo amin’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire.
Lalao tafiditra amin’ny andro fahefatra amin’ny fifanintsanana ho
an’ny Can 2022. Araka ny fanambarana nataon’ny federasiona
malagasin’ny baolina kitra (FMF), nomen’ny Aviation Civile de
Madagascar (ACM), fahazoan-dalana manokana hiditra eto Madagasikara
ny delegasiona ivoarianina, na mbola mikatona aza ny sisin-tanin’i
Madagasikara. Raha tsy misy ny fiovana, ho tonga ny 15 novambra, ho
avy izao ny Elefantan’i Côte d’Ivoire ka fiaramanidina manokana
Airbus no hitondra azy ireo.
Mety hiaraka higadona eto avokoa ny
ekipa roa tonta satria avy hatrany hamonjy an’i Madagasikara izy
ireo, raha vantany vao ho vita ny lalao mandroso, hatao ny 14
novambra ho avy izao.
Nahazo fankatoavana avy
Na izany aza, tsy maintsy misy
hatrany ny fitiliana sy ny fizahana ara-pahasalamana atao amin’ireo
mpilalao rehetra sy ny mpikambana rehetra ao anatin’ny delegasiona,
mialoha sy mandritra ary aorian’ny baikon’ny kaonfederasiona
afrikanina (Caf). Tsiahivina fa hatao any amin’ny kianja Stadium
Barikadimy Toamasina, ny talata 17 novambra 2020, amin’ny 4 ora
tolakandro io lalao miverina eo amin’ny roa tonta io. Marihina fa
efa nahazo fankatoavana avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena
(Fifa) io fotodrafitrasa any amin’ny faritra atsinanana io.
Ankoatra izay, tsy hihoatra ny 5000 ny totalin’ny olona afaka
miditra ao anaty kianja, hanatrika io fihaonana miverina io.
Efa nalefan’ny federasiona malagasy
ny baolina kitra any amin’ny Caf sy ny federasiona ivoarianina
(Fif) ny valin-teny momba io fahazoan-dalana manokana hidiran’ny
Elefantan’i Côte d’Ivoire eto Madagasikara io.
L’article Kitra – Fikatonan’ny sisintany: Afa miditra eto ny Elefanta Ivoarianina saingy manaraka fepetra a été récupéré chez Newsmada.
Jeu d’Echecs-Minichess/FMJE: norombahin’i Fy ny fandresena
Nizotra tsara araka ny tokony ho izy ny lalao échecs nokarakarain’ny fikambanana Minichess Madagascar sy ny federasiona malagasy ny jeu d’échecs, omaly. Lalao natao tamin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra, teo ambany fiahian-dRakotomaharo Fy, izy ity. I Fy izay nahazo ny fandresena, tafaperaka eo amin’ny laharana voalohany. Mpandray anjara nanodidina ny 85 teo ny namaly ny antso ary nisy mpilalao vahiny miisa 10. Isan’izany ry Isaac Okeke (Nizeria), i Emmanuella Enomah (Nizeria), i Sinan Kistner (Alemaina), i Caxita Esperanç (Angola), i Mialy Rozec (Frantsa), i Miloud Mezouaghi (Frantsa) ary i Nino (Frantsa). Vola 335 000 Ar ny nozaraina tamin’ireo mendrika ka azon’i Fy ny 100 000 Ar, amin’ny maha laharana voalohany azy. 9/9 ny isa azony nandritra lalao nahitana “9 rondes”.Tsy maintsy miandry 24 ora hatramin’ny 48 ora vao afaka mamoaka ny tena valin-dalao marina ny mpikarakara mba hanaovana fanamarinana tsara sao nisy ny “triche”, amin’ny maha lalao nampitain-davitra azy.Mi.Raz L’article Jeu d’Echecs-Minichess/FMJE: norombahin’i Fy ny fandresena a été récupéré chez Newsmada.
Sehon’i Lalatiana: nanaingo ny fiarahana i Olombelo Ricky sy Rija R
“Fehezam-boninkazo”. Niverina matetika izay, nandritra ilay fampisehoana niarahana tamin’i Lalatiana, ny tolakandron’ny alahady lasa teo. Niendrika fehezam-boninkazo tokoa satria natao ho fanomezana ho an’ireo renim-pianakaviana izany, amin’ny maha fetin’ny reny ny fotoana. Niaraha-nigoka kosa anefa ny kanto nomen’i Lalatiana sy ireo mpitendry, indrindra ireo mpijery nameno ny efitranon’ny Arena Ivandry. Nifanakaiky kokoa ny sehatra sy ny toerana nisy ireo mpijery ka voatana hatramin’ny faran’ny seho ny hafanana. Vao nanomboka ny feonkira voalohan’ny “Ranomason’ankizy”, efa tsinjo fa hafana ny fiarahana. Saika niarahan’ny rehetra avokoa mantsy ireo hira 30 mahery nalahatr’i Lalatiana sy ny mpitendry nanaraka azy nandritra izany. Toy ny mahazatra amin’ny sehon’i Lalatiana, nangatahin’ny mpijery famerenana ry “Misy antony”, ny “Tsy anjarako ianao”, ny “Moron-drano”, sns. Nampiavaka sy nanaingo iny fiarahana iny kosa ny nahatongavan’ny Olombelo Ricky tao. Niarahany tamin’i Lalatiana ny “Izy indrindra” sy ny “Mena masoandro”, izay tsy nampitombina ireo mpijery. Tsy nilatsaka akory izay hafaliana sy hafanana izay dia niakatra an-tsehatra koa i Rija Ramanantoanina nanao ny “Mama”, avy eo, narahin’ny “Tsara iafarana”, hira fampiaraham-peo nahafantarana indrindra azy mianadahy… Zo ny Aina L’article Sehon’i Lalatiana: nanaingo ny fiarahana i Olombelo Ricky sy Rija R a été récupéré chez Newsmada.
Herinaratra avy amin’ny masoandro: hampitomboana avo roa heny ny tanjaka any Ambatolampy
Hampihena ny masonkarenan’ny Jirama ny fividianana herinaratra azo havaozina, toy ny avy amin’ny masoandro. Anisan’ny manana tanjaka lehibe ny any Ambatolampy izay nampitomboana avo roa heny (40 MW) ny vokatra.Natao sonia, ny herinandro lasa teo, ny fifanarahana eo amin’ny tale jeneralin’ny Jirama, Andria­man­ga Vonjy, sy ny tompon’andraikitry ny orinasa tsy miankina, ny Green Yellow. Mifantoka amin’ny hampitomboana avo roa heny, ho 40 MW, ny herinaratra avy amin’ny masoandro hovokarina, any Ambatolampy, raha toa ka 20 MW izany, ankehitriny. Haharitra herintaona ny asa fanitarana hanaovan’ny Green Yellow azy ka hahazo io tanjaka 40 MW io, manomboka amin’ny taona 2021, ny mpanjifa ao anatin’ny Tambajotra iraisan’ An­ta­nanarivo (RIA), ahitana ny eto Antananarivo sy ny manodidina, ny mianandrefana ary ny mianatsimo hatrany Antsirabe. Lehibe indrindra aty AfrikaVita tamin’ny volana jona 2018 ity toby famokarana herinaratra avy amin’ny ma­soandro any Ambatolampy ity, anisan’ny lehibe indrindra aty Afrika sy eto Madagasi­kara. Ahitana takelaka misintona herin’ny masoandro mi­isa 73 000 amina velaran-tany mirefy 33 ha ka samy mamokatra herinaratra 275 W tsirairay avy. Nahatratra 20 tapitrisa euros ny fampiasam-bolan’ny Green Yellow tamin’ireo. Ma­haritra 25 taona ny fe-potoana fiaraha-miasany amin’ny Jira­ma, amin’ny hividianan’ity fa­rany ny herinaratra vokatra.Lehibe indrindra eto amin­tsika ity toby ity, ary misy toby faharoa hafa any Maeva­tanàna, an’ny orinasa tsy mi­an­kina iray hafa, ny First Energy.Njaka AndriantefiarinesyL’article Herinaratra avy amin’ny masoandro: hampitomboana avo roa heny ny tanjaka any Ambatolampy a été récupéré chez Newsmada.
Hovelomina indray ny takelaby famantarana ny lalana Mahatma Ghandi eny Mahamasina, sy ny lalana Indira Ghandi eny Tsaralalàna. Nisongadina izany tamin’ny fihaonan’ny tompon’andraikitry ny tanànan’Antananarivo sy ny masoivoho vaovaon’i Inde monina sy miasa eto Madagasikara, i Abbay Kumar, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely.Hovelomina, toy izany, koa ireo mari-pamantarana amin’ny arabe na « marquage au sol » amin’ireo lalana roa ireo. Tafiditra amin’ny fahatsiarovana ny faha-150 taona nahaterahan’i Mahatma Ghandi izao hetsika izao.Hotokanana tsy ho ela ireo lalana ireo. Voaresaka koa nandritra ny fihaonana teo amin’ny roa tonta ny hanaovana tanàna mpirahavavy an’Antananarivo amin’ny tanàna iray any Inde.Tamin’ity herinandro ity, nitarika atrikasa niaraka tamin’ny mpandray anjara 24 avy amin’ny firenena 14 manerana an’i Afrika ny ekipan’ny Peace Corps sy ny mpanolotsaina momba ny sakafo ara-pahasalamana avy amin’ny USAID. Tamin’izany no nianarany ny fomba tsara indrindra hanampiana ny reny sy ny zaza hitondra fanovana mahomby eo amin’ny fahasalamany sy ny sakafo hohaniny. Hoentin’izy ireo mody any an-tanindrazany izany fahalalana izany ary hampianariny olona maro. Fomba fanehoana fihetsika ara-pahasalamana izany.L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Sakaraha : « Délégué de vote » ana kandidà tsy miankina, maty voafira famaky
Nihoson-drà ny fifidianana Solombavambahoaka tao Sakaraha, Faritra Atsimo Andrefana. Tovolahy iray mpianatra ao amin’ny oniversiten’i Maninday Toliara, antsoina hoe : Bastide dit Ragnitsy, izay « délégué de vote » ana kandidà tsy miankina iray ao Sakaraha no nisy namono, ka maty voafira famaky teo amin’ny lohany, afak’omaly hariva, tokony ho tamin’ny enina ora. Raha ny vaovao voaray, dia avy tao amin’ny foiben-toeran’ny kandidà tohanany ity tovolahy izay nandeha bisikileta hamonjy fodiana ity, no nisy nanakana teny an-dalana tsy lavitra ny biraon’ny Distrika, ka voakapoka famaky teo amin’ny lohany, ary naratra be. Na dia nialan’ny mpitsabo nenina mafy aza izy, nefa noho ny fahaverezan-drà be loatra, dia tsy tana ny ainy. Manoloana izao vono olona nahatsiravina nahavalalanina ny maro izao, dia misokatra ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny fikarohana ny/ireo nahavanon-doza. Eric ManitrisaL’article Sakaraha : « Délégué de vote » ana kandidà tsy miankina, maty voafira famaky a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nampahafantatra ny fiarahamonim-pirenena Rohy, omaly, fa tsy omen’ireo depiote lanja ny fampiasana ny volam-bahoaka momba ny tetibolam-panjakana 2019. Manan-jo ny vahoaka, araka ny Lalam-panorenana, hahafantatra ny fomba fandanian’ny governemanta ny volany. Zava-dehibe momba izany lalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana 2019 izany ny hoentin’ny governemanta vaovao miasa amin’ny fitondrana manaraka. Ny 21 novambara teo, nitondra fanazavana momba izany ny minisitra tompon’andraikitra, Andriambololona Vonintsalama. Ireo depiote mba tonga ao anatin’ny komity misahana ny tetibola anefa zara raha namakafaka izany antontan-taratasy matevina izany, ny 22 novambra. Nilaza fotsiny ny filohan’ny komity fa ny 26 novambra no hanapahan-kevitra momba io tetibola io. Nomarihin’ny fiarahamonim-pirenena Rohy fa ho tanterahina izany, nefa ny olom-pirenena tsy mahalala ny antsipiriany hatramin’izao ; tsy naka fotoana akory ireo depiote handalina ny momba izany ; tsy tena nisy fifanakalozan-kevitra teo amin’ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka. Mitaky amin’ireo lazaina fa « solombavam-bahoaka » ny fiarahamonim-pirenena Rohy hanao ny adidiny manoloana ny fahefana mpanatanteraka, amin’ny maha solontenan’ny vahoaka azy. Noho izany, tokony hanokana fotoana izy ireo hanadihady ny tolo-dalàna ; hihaino sy hamakafaka ny andaniny hafa, toy ny fiarahamonim-pirenena ; hatao izay hisian’ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny olom-pirenena sy ny governemanta ; izay vao tokony hirosoana ny fandaniana ny tetibolam-panjakana. Miandry fitondrana vaovao Mazava aloha ny antony tsy hanomezan’ireo depiote ankehitriny lanja ny fandalinana ny tetibolam-panjakana 2019. Tsy ho eo amin’izany toerana izany intsony ny maro amin’izy ireo amin’ny fotoam-piasan’ny Antenimieram-pirenana manaraka, miaraka amin’ny fitondrana vaovao. Maro amin’ny olom-pirenena koa no tsy taitra amin’ireny fotoam-pivoriana misokatra ho an’ny rehetra ireny. Azo antoka fa tsy maintsy mbola hiverenan’ny depiote vaovao io lalàna momba ny tetibolam-panjakana io. R.MathieuL’article Tetibolam-panjakana 2019: tsy omen’ireo depiote lanja ny fandaniana izany a été récupéré chez Newsmada.
Le Directeur Général des Douanes, Lainkana Zafivanona Ernest a tenu, hier, une conférence de presse concernant ce nouveau coup de filet. La douane malgache renforce les contrôles et le niveau de vigilance au niveau des aéroports. Des efforts qui sont couronnés de succès puisque la douane vient de mettre la main sur 15 kg 245 d’or qu’un ressortissant malgache a tenté d’expédier illicitement samedi dernier à Dubaï par fret aérien. Le contrevenant a tenté de faire passer cette quantité importante d’or en le dissimulant dans 257 feuillards d’or repeint en aluminium sous forme de parois d’une grande caisse métallique contenant des produits artisanaux malgaches, notamment de la ferronnerie d’art en forme de baobab. C’est la taille disproportionnée de la caisse contenant les produits artisanaux a éveillé le soupçon des douaniers. Etant en effet trop grande, ladite caisse ne pouvait pas passer au scanner. Du coup, les douaniers ont décidé de procéder à un contrôle plus approfondi ayant abouti à la découverte des feuillards d’or repeints en couleur alu. Il s’agit, selon la direction générale des douanes d’une infraction mixte, c’est-à-dire minière et douanière. En attendant son déferrement, le contrevenant est actuellement mis en détention provisoire. On rappelle que la douane a procédé ces derniers temps à de nombreuses saisies de marchandises illicites. Prouvant ainsi sa volonté de lutter efficacement contre les trafics au niveau de nos frontières. R.Edmond. L’article Ivato : 15 kg d’or saisis par la douane est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Ivato : 15 kg d’or saisis par la douane a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Niara-nitoRY ny fianakaviana: Ankizivavy enina indray naolan’i Gaëtan
Tsy misy farany ! Tratra teo am-panolanana ankizivavikely mbola virijiny vao 13 taona ny raim-pianakaviana iray 45 taona, antsoina hoe Gaëtan, ny alakamisy tao Am­bohibary distrikan’i Mora­manga. Nosamborin’ny zandary avy ao amin’ny poste avancé ao Ampitabe ity nahavanon-doza ity. Tonga nitoroka sy nitory ihany koa ny fianakaviana hafa tao an-toerana fa hoe manan-janaka dimy efa voaolan’i Gaëtan, talohan’ izao ka misy kambana vao 10 taona, ny zandrin’ireo kam­bana ireo vao 9 taona, ankizikely hafa 8 sy 12 taona. Efa nozahan’ny mpitsabo ireto ankizikely niharan’ny fanolanana ireo ary manaraka fitsaboana na ara-batana izany na ara-tsaina. Fa tratran’ny zandary ao Matsondakana koa ny jiolahy antsoina Sébastien, izay nanolana zazavavikely vao 8 taona monja tao Am­bohitsara Matsondakana distrikan’i Befandriana Avaratra, ny alakamisy teo ihany.J.CL’article Niara-nitoRY ny fianakaviana: Ankizivavy enina indray naolan’i Gaëtan a été récupéré chez Newsmada.
Tarika Vaovy: nodimandry i Damy Managnosike
Araka ny vaovao nampitain’ny Vaovy, La Fondation, ao anaty tambanjotran-tserasera, nodimandry teo amin’ny faha-65 taony i Damy Managnosike. Mpitendry lokanga ao amin’ny tarika Vaovy izy. Nandritra ny naha mpanakanto azy, firenena marobe ny efa notetezin’i Damy Managnosike. Raha ny voalazan’ny Vaovy, La Fondation, « izao tontolo izao no efa hitany ». Fantatra avy amin’io vaovao anaty tambanjon-trantserasera io fa narary ka notsaboina teny amin’ny hopitaly Befelatanana izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao.Marihina fa eo am-panomanana ny hetsika ho fahatsiarovana an’i Fanovona Jean Gabin na i Vaovy ny tarika amain’izao fotoana izao. Raha ny fikasana sy ny vina novolavolain’ny Vaovy, La Fondation, amin’ny taona 2021 izao no hanatanterahana io tsiahy an’i Vaovy io.Mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’i Damy Managnosike sy ny Vaovy, La Fondation, ary ny tontolon’ny kolontsaina malagasy ny Gazety Taratra.Nanangona : HaRy RazafindrakotoL’article Tarika Vaovy: nodimandry i Damy Managnosike a été récupéré chez Newsmada.